KUNGANI INGANE IFAKA IMINWE EMLONYENI NJALO - PAMPEREDPEOPLENY.COM - UKUKHULELWA-UKUKHULISA
Kungani Ingane Ifaka Iminwe Emlonyeni Njalo
Ikhaya Ukukhulisa ukukhulelwa Ingane Baby oi-Anwesha Ngu U-Anwesha Barari | Kubuyekezwe: NgoLwesibili, Mashi 25, 2014, 11:55 [IST] Ingane ifaka umunwe Emlonyeni | Ingabe ingane yakho ifaka iminwe emlonyeni? UBoldsky
Kumele ngabe wazama ukutshela abangane bakho nomndeni wakho ukuthi ingane yakho ifaka iminwe yayo emlonyeni ngokuqhubekayo. Futhi impendulo kufanele ukuthi, ‘O! Yini oyilindele enganeni! ' Uthola izimpendulo eziningi ezinjalo zezincwadi ezivela kubantu okungenzeka ukuthi abanazo izingane noma izingane zabo sezikhulile futhi bakhohliwe ukuthi zingaba zincane kanjani izingane ezincane. Ingane yakho ukufaka isibhakela sayo emlonyeni kungaba yinto engokwemvelo kepha nakanjani kuzokwenza impilo yakho ibe nzima.
Okokuqala, uma ingane yakho iphakathi kwezinyanga ezimbili kuya kwezingu-6, lokhu-ke akuyona indaba yokuncela isithupha. Ingane yakho isencane kakhulu ukuthi ingajwayela ukuncela isithupha, ngakho-ke yeka ukukhathazeka. Izingane ezisanda kuzalwa ngokuvamile azikwazi ukugxilisa umunwe wazo eceleni ngakho-ke zifaka isandla sazo sonke emlonyeni wazo. Lapho ingane yakho ifaka yonke iminwe emlonyeni, kungenzeka ukuthi iminyanise kuyo futhi ikhuze ubisi. Yilokhu okucasula kakhulu ngengane yakho ngokufaka isibhakela emlonyeni.
IZINDLELA EZINGU-16 ZOKUZALISA UMNTWANA
Iqiniso ukuthi ngaphandle kokwandisa umsebenzi wakho, lolu hlobo lokuziphatha oluvela ezinganeni luyimvelo ngokuphelele. Kufanele uqonde ukuthi ingane yakho ifaka konke emlonyeni wayo ngesizathu. Futhi lapho isizathu singekho, ingane izophuma kulo mkhuba iyodwa. Okwamanje, usukulungele ngokusula namabhibhi.
Nazi ezinye izizathu zokuthi kungani ingane yakho ifaka iminwe yayo emlonyeni nokuthi yini ongayenza ngakho.
Ukubeka konke emlonyeni kuyindlela ingane yakho ethola ngayo izinto ezintsha emhlabeni. Umbono wengane yakho nomuzwa womsindo kusalukhuni. Ngakho-ke, umntwana osanda kuzalwa uncike emqondweni wakhe wokunambitha ukuzwa umhlaba.
Kwezinye izimo, ukuncela iminwe kuyindlela ingane ezithambisa ngayo. Ukuzithambisa kuyinto enhle kuyisinyathelo sokuqala sokuzimela futhi kufanele ukukhuthaze.
Lapho ingane izwa, izobheka induduzo yokuhlafuna cishe noma yini. Isandla sakhe siyindlela nje etholakala kalula.
Ezinye izingane zingena emkhubeni wokuncela izandla zazo lapho zilambile. Nguwe kuphela njengomama ongathatha lokho kusikisela. Khumbula ukuthi yonke ingane ihlukile futhi inendlela yayo yokuxhumana.
Lapho ingane yakho ifaka isibhakela sonke emlonyeni, kungenzeka iphose phezulu, ngakho-ke lungela ngokubopha ibhibhi entanyeni yengane.
Gcina Iminwe Yokusula
Hlala njalo usula izandla zengane ngama-wipe amanzi ukuze ingatholi noma yisiphi isifo esibi.
Uma usanda kuguqula izingubo zengane yakho futhi ungafuni ukuthi iphose khona manjalo, gcina ingane iphazamisekile. Ungabamba izandla zengane yakho ngobumnene futhi wenze ezinye izenzo zokuzigcina umatasa.
Izindandatho zokuthambisa zingaduduza kakhulu izingane ezisencibilikisayo. Banesifiso sokuhlafuna okuthile ngokuphuthumayo. Izindandatho zokuthambisa zinzima kakhulu uma ziqhathaniswa neminwe futhi ngenxa yalokho ingane yakho izothola induduzo enkulu kuma-teether.
Kwesinye isikhathi, ukondla kungaba yindlela yesikhashana yokugcina ingane yakho ingayihlafune noma iminwe. Kepha ngeke kusebenze isikhathi eside.
Zitike Ngengane Ngezinye izikhathi
Kufanele uvumele ingane ukuthi imunce iminwe yayo noma ngabe lokho kukuphazamisa. Zonke izigaba ekukhuleni kosana lwakho kufanele ziphile ngokugcwele. Uma ungayivumeli ingane yakho ukuthi ifake iminwe emlonyeni wayo manje, ingahle ibe nomkhuba wokuncela isithupha lapho isikhulile.
amanoveli endaba yothando ngabalobi baseNdiya pdf
singafaka yini imaski yezinwele ngemuva kokugcoba uwoyela
indlela yokwenza i-cutlet kuhhavini le-microwave
ingabe ukulala ntambama kukhulisa isisindo
kanjani ukuthola izinwele ze-bouncy ngokwemvelo ekhaya